Sawirro: Puntland oo howl-gal ka fulisay Cali Madow - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Puntland oo howl-gal ka fulisay Cali Madow
Sawirro: Puntland oo howl-gal ka fulisay Cali Madow
Boosaaso (Caasimada Online) – Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howl-gal qorsheysan oo saacadihii la soo dhaafay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee maamulka Puntland ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah gobolka Bari ee maamulkaasi.
Howl-galka oo ka dhacay deegaanka Dolqooxle ee Buuraha Cali Madow oo hoostaga tuulada Af-Urur ayaa waxaa lagu beegsaday xubno ka tirsan Al-Shabaab & Daacish.
Saraakiil u hadlay PSF-ta Puntland ayaa sheegay inay heleen, ka hor howl-galkaasi xog ku aadan dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo ku dhuumaaleysanaya halkaasi.
“Howl-galkan ay ciidanka PSF fuliyeen ayaa yimid kadib markii ay ciidanka PSF heleen xog sheegaysa in ay Buuraleyda aaggaas ay yimaadeen kuna dhuumalaysanayaan xubno ka tirsan Al-shabaab,” ayaa lagu yiri warka qoraal ee kasoo baxay taliska PSF-ta.
Sidoo kale saraakiisha ayaa intaasi ku sii daray inay sii wadi doonaan howl-galladooda ka dhanka ah Al-Shabaab & Daacish ee ka socda dhulka buuraleyda ee maamulkaasi.
Muddooyinkii u dambeeyey ciidamada ammaanka Puntland ayaa labo jibaaray dhaq-dhaqaaqyada ka dhanka ah kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab ee gobolka Bari.